Fanavaozana - Foton Motor Group Co., Ltd.
Rafitra R&D eran-tany misy ambaratonga roa miaraka amin'i Beijing ho foibe, Alemana ho ivon'ny fitaovana elektronika sy herinaratra ary ny haitao ho avy ary Japon ho mpanamory fiaramanidina mpandeha R&D hananganana fahaiza-manavaozana haitao manerantany.
FANARAHANA SY FAMPANDROSOANA
teknolojia sy ny maha-olombelona
Ny tanjaka vaovao dia mipoitra avy amin'ny fifanakalozana teknolojia sy ny zanak'olombelona. Ny ivon'ny R&D an'i FOTON any Shina, Alemana ary Japon dia nanangona injeniera 6 500 avy amin'ny firenena 40 mahery ary nanatri-maso patanty 5.000 R&D.
Fitsapana sy fanamarinana
fahafaha-manao fitiliana simika virtoaly
Ny fahaiza-manao fitsapana simika virtoaly mitarika indostrialy ao anatin'izany ny fiarovana ny fianjerana, ny aerodynamika ary ny simulation NVH ary ny fanatsarana izay manatsara ny traikefa amin'ny fiara, ny filaminana sy ny fahamendrehana.
TEST SAFETY CRASH
Ny fitsapana ny tanjaky ny cab dia mitarika eo amin'ny indostria.
Ilay voalohany manao fanadihadiana CFD momba ny aerodynamika sy ny tionelin'ny rivotra ao Shina, mampihena ny fanoherana ny rivotra hatramin'ny 20% ary mitahiry solika 4%.
NVH SIMULATION AND TEST OPTIMIZATION
Fiarovana ara-teknolojia NVH mitarika indostria, manatsara ny traikefa amin'ny fiara amin'ny alàlan'ny fampihenana ny hovitrovitra sy ny tabataban'ny singa manan-danja toy ny motera, vatana ary chassis.
Ny fitoniana sy ny fahalemen'ny asa mitarika manerantany
Azo itokisana sy maharitra ny indostria
olombelona, ​​kamio ary lalana
FOTON dia nanangana kamio mizaka tena voalohany an'i Shina tamin'ny taona 2016. Ny fizarana dia zaraina amin'ny zanak'olombelona, ​​kamio ary làlana ho an'ny fiara mitondra fiara azo antoka, mahazo aina, mitahiry angovo ary mahomby amin'ny alàlan'ny IOV, angon-drakitra lehibe ary fampiharana ny fiara mitokana L3. Hanomboka amin'ny 2025 ny famokarana faobe ny kamio mizaka tena.
IFOTON, mpamatsy serivisy IOV mitarika, mampifandray ny olona, ​​ny fiara ary ny terminal miorina amin'ny IOV, angon-drakitra lehibe sy sehatra rahona mba hizarana fampahalalana tena izy, mifampiresaka haingana amin'izao tontolo izao ary manatsara ny R&D fiara, ny famokarana, ny marketing ary ny serivisy hahafahan'ny mpampiasa mba hananana fandidiana manan-tsaina sy fanaraha-maso ary fifandraisana misy eo an-dafin'ny fiara. IFOTON dia manome vahaolana IOV iraisan'ny fiara FOTON, mpanjifa avy amin'ny indostria, agents ary koa mpamatsy, mpiara-miasa ary governemanta.
UBI Insurance Navigation natokana ho an'ny fiara mifandraika amin'ny famatsiana solika dia manolotra famatsiana solika eo akaiky eo Fanadihadiana tsy ara-dalàna Fifamoivoizana amin'ny fotoana tena Akaiky ny fisakafoanana Akaiky ny toerana fijanonan'ny fiara fitobiana akaiky indrindra
Diagnostika lavitra Fanaratsian-tanana torolàlana Fikarohana momba ny fiara Fiarovan-tena manohitra ny halatra Fampatsiahivana fampitandremana famonjena vonjy maika
Fanatsarana ny vokatra Fanatsarana ny kalitaon'ny Marketing Marketing fanadihadiana ny tsena